Home Maskax-fur Ramadan: 8 talo oo ku saabsan Cuntooyiinka caafimaadka leh ee afurka
Soonka waa fursad u wanaagsan la qabsashada dhaqamo caafimaadka kordhiya iyo cuntooyiinka wanaagsan.
Inta Soonka lagu jiro, ku dadaal cuntooyiin caafimaadka u fiican - UNSPLASH
In la cuno raashiin isu dheellitiran waxay aad ugu wanaagsan tahay awooddaada beri iyo caafimaadka caloosha iyo jirka intiisa kale.
Maadaama afurka yahay wax aad loo jecel yahay oo la isaga bi’iyo gaajadii maalinta oo dhan, balse wuxuu farxad iyo caafimaad u yahay dadka la qabsada dabeecado wanaagsan iyo dhaqamo suuban oo la xiriira waxa la cunayo iyo joogteynta cibaadada.
Cuntada isu dheellitiran waa muhiim. Haddaba waa in aad dadaal dheer u gashaa sidii aad u cuni lahayd raashiin caafimaad leh.
Looma baahno in bisha Ramadan la cayil ama calool wayn ay ku gasho – taas oo ka dhalata in noocyo badan oo cunto ah aad cunto, ka dibna dhereg la kici waydo.
Halkan waxaa ku qoran dhowr talo oo laga soo uruuriyay dhaqaatiirta Islaamka ee ku saabsan caafimaadka iyo cuntada lagu afuri karo.
1- Timir ha noqoto waxa ugu horreeya ee aad cuneyso
Sida caadiga ah, timirta waa cuntada ugu horeysa ee lagu af-furo. Waa sida aan ka barangay diinteenna suuban, waxaana laga helaa nafaqooyiin kala duwan oo soo celiya awooddii jirka ka baxday.
Haddii madax-xanuun aad dareemto inta aad sooman tahay maalintii, waxay u badan tahay in taa ay ka dhalatay Sokorta dhiigga oo aad hoos ugu dhacday, haddaba 3 xabo oo timir ah ku bilow, waxay soo celineysaa sokorta wanaagsan ee caafimaadka leh.
2- Biyo cab ka hor inta aadan wax cunin
Waxaad cabtaa biyo ama cabitaanno laga sameeyay khudradda wanaagsan sida liin ama caano yar. Taas waxay kaa caawineysaa in jirkaaga uu ka soo kabsado biyihii ama dheecaankii ka dhammaaday.
Haddaba biyaha waa in ay noqdaan kuwa ugu badan ee aad cabeyso. Illaa hal galas ka cab ka hor inta aadan wax cunin. Ka dib cuntada na cab ugu yaraan hal galaas oo kale.
Inta aad cuneyso, waad cabi kartaa biyaha, sababtoo ah waxay caawinayaan hannaanka dheef-shiidka. Iska ilaali cabitaannada sokorta ay ku badan tahay iyo cuntooyiinka leh maadooyiinka keeni kara cayilka.
3- Ugu yaraan hal galaas oo maraq ah cab
Maraqa cad wax lagu bedesho ma lahan xilliga af-furka. Biyo badan ayuu leeyahay, wuxuuna u fiican yahay jirka qalalay ee biyaha ay ka dhammaadeen.
Waxaa fiican marka lagu daro misir, yaanyo iyo khudrad kale. Ha u dhowaanin waxyaabaha qaboga ah. Haddii aadan jecleyn maraq qandac ah, waad iska qaboojin kartaa.
4- Cunidda khudaarta
Khudaarta waxaa ka buuxo fitamiinno, macdan iyo maadooyiin kale oo u wanaagsan caafimaadka. Waxaa sidoo kale laga helaa nafaqo.
Haddaba waxaa aad u wanaagsan in kaalinta hilibka iyo bariiska aad geliso khudaarta – taa micneheedu ma ahan in hilib ama bariis iyo cuntooyiinka kale aad ka tageyso, balse iska yaree.
Khudaarta waad ku dhergeysaa, waxayna kaa caawineysaa in raashiinka kale aadan iska badinin.
Khudaarta waad cuni kartaa ama waxaad ka dhigan kartaa cabitaan – sokorta haka badinin ama haku darin, sababtoo ah waxay dhibaato ku tahay caafimaadka.
5- Cun raashiinka laga helo maadada carbohydrate-ka caafimaadka leh
Af-furka ku dar hilib yar (kalluunka ayaa ugu wanaagsan) iyo cuntooyiinka laga helo carbohydrates. Waxaa ka mid ah bariiska, digirta, baastada, rootiga, bataatiga iyo xabuubka.
Cuntooyiinka waxaa laga faa’idaa awood iyo tamar joogto ah iyo in maalinta soonka uu jirkaaga u adkeysto.
6- Cuntooyiinka borotiinka yar waad cuni kartaa
Xilliga af-furka, waa in ujeedkaagu noqdaan sidii aad u cuni lahayd cunto leh borotiinno wanaagsan oo hannaanka dheef-shiidkana u fudud. Sidoo kale waa in ay lahaadaan maadooyiinka aasidhka caafimaadka leh.
Borotiinka wuxuu jirkaaga ka anfacayaa in murqaha ay dhismaan. Kuwa aad kaheli karto waxaa ka mid ah hilibka lo’da, caanaha, suusaca, ukunta, bur-cadka, farmaatada, kalluunka iyo digaagta.
Waxaa dhammaantood laga helaa borotiinno tayo leh. Haddii kuwaa adan jeclayn, waxaad cuni karta lowska ama digirta.
7- Ha cunin raashiin badan – Tartiibna u cun
Si degdeg ah wax ha u cunin, maadaama aad maalinta oo dhan soo baahnayd. Cuntada oo la boobsiiyo, la iskana badiyo, waxaa ka dhasho in hannaanka dheef-shiidka oo si wanaagsan u shaqeyn waayo, iyo gaas in aad ka qaado.
Cunto yar oo fudud ku bilow si caloosha ula qabsato. Si qiyaas ahna u cun – waa talada caafimaad ee ugu wanaagsan, waana qaabka aad ku xakamayn karto cayilkaaga.
Ha cunin wax ka badan qiyaastii qadadaada ama cashada.
8- Ha cunin raashiinka ay ku badan yihiin dufanka, cusbada iyo sokorta
Wax kasta oo dhaca, ka fogow cunidda raashiinka culus eel eh dufanka badan, cusbada iyo sokorta – ha ku af-furin, haddii aad awooddo.
Inta aad jikada ku jirto, ka fikir sidii aad u Karin lahayd cunto caafimaad leh. Ku dar waxyaabaha caafimaadka ku badan yihiin.
Ugu dambeyn, waxyaabaha macmacaanka ah ku bedelo cabitaannada sida dabiiciga ah u macaan ee aan sokorta u baahnayn.
Previous articleRamadaan: Cuntooyinka ugu wanaagsan ee xilliga afurka iyo suxuurta
Next articleDabeecadahan wanaagsan ee qofka Muslimka ah
Dabeecadaha aad milyaneer ku noqday intaad da’yar tahay